Ahụmahụ Semalt: Web Page Extra - Top Advice
Ngwá ọrụ ndị kwesịrị ekwesị nwere ike ime ka ọ dị mfe iji melite saịtị gị maka SEO na na-ewepụta ọtụtụ data dị mfe. Otu ngwá ọrụ dị otú ahụ bụ SEO Spider Tool. Usoro a na-enyere aka nyochaa saịtị ma chọpụta ezughị okè nke mebiri njikwa ogo ọchụchọ gị. Enwere ike ịbudata ngwa ngwa desktọọpụ a ma wụnye ya na kọmputa gị, Linux ma ọ bụ Mac. Ọ ga-egwu ma nyochaa njikọta nke saịtị gị, foto, faịlụ CSS na data ndị ọzọ maka nzube SEO. Ọ ga-enyochakwa blog gị ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ, ịchekwa oge ọrụ na oge n'ihi na ịchọta ntuziaka nwere ike iwe ọtụtụ ụbọchị ma bụrụ ihe ịma aka nye onye ọ bụla.
1. Download na Wụnye:
Ihe SEO Spider Tool dị maka Mac, Linux, Ubuntu, na Windows ma zuru oke. Otú ọ dị, mbipute a na-enwe n'efu na-abịa na njirimara ezughi oke, na ịzụta ikikere ga-enye gị ohere igbakwunyekwuo URL ka edepụta ma nyochaa ya. Ọ bara uru ma weebụsaịtị ma dị elu na nke zuru oke ma zuru oke maka ndị na-abụghị ndị mmemme. Ị nwere ike ibudata freeware a na Google Play Store ma ọ bụ ọzọ yiri online ụlọ ahịa na-enweta ya arụnyere.
2. Wepụ ma ọ bụ wepụ weebụsaịtị:
Ozugbo ebudatara na arụnyere, nzọụkwụ ọzọ bụ ịtinye URL ahụ n'ime igbe nchọta ya maka ihe ndị na-agba agba. Mbụ, ị ga-etinye URL ahụ yana HTTP ma ọ bụ https code wee pịa bọtịnụ Malite..Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmịnyekwu ngalaba, ị ga-arụ ọrụ nhọrọ Crawl All Subdomains n'okpuru Nhazi> Ebe nchekwa. Dabere na nha nke saịtị gị, usoro nsị na ntinye ga-ewe nkeji ole na ole.
3. Lelee Redirects:
Ikwesịrị ịmalite ịlele niile redirects maka njehie omume ma wepụ ha ozugbo enwere ike ka usoro a gaa n'ihu na-arụ ọrụ n'enweghị ihe ọ bụla. Ndị isi redirects bụ 301 na 302. N'ikpeazụ, ị ga-ahụkwa njehie 404 na 505 nke na-egosi mgbe ị gara na ibe ndị na-adịghị adị n'ezie.
Site na SEO Spider Tool, ị nwere ike nyochaa URL niile ma wepụ ederede bara uru ma ọ bụ ihe oyiyi dabere na ihe ị chọrọ. A ga - echekwa ihe niile ahụ na nchịkọta URL. Jide n'aka na ị nyochala ogologo URL ahụ site na ịtọpụta ogidi ya, ị ga-enyochakwa ihe nzacha maka ihe odide ASCII, akọwapụta, uppercases, oyiri na ọdịnaya dị ike ma ọ bụ URL.
Nke ọzọ, ngwá ọrụ a ga-enyere gị aka ịlele nchịkọta peeji. Jide n'aka na ibe gị niile nwere aha pụrụ iche ka usoro a wee wepu ozi bara uru maka gị n'enweghị nsogbu ọ bụla. I kwesịkwara ịtinye isiokwu bụ isi n'ime aha nke ibe ahụ ka nyocha ahụ wee malite ozugbo ma weghaa njehie niile na akpaghị aka.
Ị nwere ike iji SEO Ngwunye Ngwá Ọrụ iji mepụta XML Sitemaps. Google, Bing, na Yahoo na-eji ụdị ntanetị a iji wepụ ọdịnaya dị mkpa. Mpempe akwụkwọ ahụ ga-enyere ndị ọrụ ọchụchọ aka ịwụ ma ọ bụ wepu saịtị gị n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ị nwere ike ịgbanwe ọnọdụ a n'ụzọ dị mfe ma gbanwee ugboro ụfọdụ nke ụfọdụ ibe dabere na ihe ị chọrọ Source .